वाग्मतीले लखेट्यो ४ सय परिवार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण १, २०७६ शिव पुरी
(बडहर्वा, रौतहट) — शुक्रबार राति बाढीले घर डुबाएपछि जसोतसो ज्यान जोगाएकी दुर्गाभगवती गाउँपालिका ५ बडहर्वाकी ६५ वर्षीया सरस्वती कोइरीको बायाँ खुट्टा भाँचिएको छ । बाढीबाट जोगिन भाग्ने क्रममा उनको खुट्टा भाँचिएको हो ।
छोरा उदयशंकरले हतारहतार उठाएर आमालाई बाँधमा पुर्‍याए । अन्नपात, लत्ताकपडा सबै डुब्यो । घटनाको पाँच दिन बिते पनि उनको खुट्टाको उपचार हुन सकेको छैन ।
राति करिब १० बजेको थियो । सबै सुत्ने तयारीमा थिए । पानी जोडले परेपछि कोइरी परिवारलाई शंका लाग्यो । बाहिरको अवस्था बुझ्न छोरा उदय बाहिर निस्केका मात्र थिए, बाढीले घर घेरिसकेको रहेछ । उनी आत्तिएर भित्रका सबैलाई बाहिर निस्कन भने । ‘ज्यानै गयो जस्तो लागेको थियो । छोराले बचायो,’ सरस्वती भन्छिन्, ‘अब सरकारले हामीलाई गाँस होइन, बासको व्यवस्था गरिदेओस् ।’
बडहर्वा गाउँमा झन्डै ४ सय घरधुरी छन् । तीमध्ये ३ सय ३८ घर डुबानमा परेका छन् । केहीलाई बाढीले बगाएर लग्यो । अहिले २ सय घरपरिवार वाग्मतीको बाँधनजिकै त्रिपाल टाँगेर आश्रय लिइरहेका छन् । ४० घर परिवारले माण्डवी नामक संस्थाले बनाइदिएको सेफ हाउसमा आश्रय लिएका छन् । विस्थापितमध्ये अधिकांशको त्रिपाल च्यातिइसकेको छ । रातभर पानी चुहिन्छ । सुत्न नपाएको चार दिन भइसक्यो । अधिकांशले खान पनि पाएका छैनन् । बस्तीनजिकै रहेको बिजुलीको ट्रान्सफर्मर ढलेको छ । बत्ती छैन । शुद्ध खानेपानीको अभाव छ । धेरैजसो पीडित रुघाखोकीबाट ग्रस्त बनेको जशोदादेवी साहले बताइन् । ‘सर्पले टोक्ने हो कि भन्ने डर पनि उत्तिकै छ,’ उनले भनिन्, ‘यसरी कतिन्जेल बस्नु ? त्रासैत्रासमा जीवन सकिने भयो ।’
यसअघि पनि वाग्मतीमा बाढी आयो भने बाँधको आडैमा घर भएकाहरू रातभर जाग्राम बस्थे । बाँध भत्किएर बगाउँछ कि भन्ने त्रासले सधैं पिरोल्थ्यो । तर अहिले त्यही बाँधको भरमा दुई सय विस्थापित त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । झाझ नदी नियन्त्रण र हुलाकी पुलको लम्बाइका कारण डुबानको समस्या बढेको वडाध्यक्ष धर्मनाथ चौधरीले बताए ।
‘गाउँ पुग्ने सडकमा १ सय मिटर लामो पुल बनाउनुपर्नेमा १२ मिटर मात्र बनाएपछि थप समस्या भयो,’ उनले भने, ‘डुबान हुनुमा प्रमुख कारण पुल पनि हो । यसको लम्बाइ तत्काल बढाउनुपर्छ ।’
यहाँ बसेका कसैको पनि निजी जमिन छैन । ऐलानी जमिनमा घर बनाएर बसेका सबै विस्थापित परिवारका हुन् । वाग्मतीका कारण केहीको खेती बगर बनेको छ । हिउँदमा उनीहरूले त्यहीँ खेती गर्छन् । थोरै उब्जनी भए पनि चित्त बुझाउँछन् ।
बस्तीमा मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, प्रहरी र सेनाका अधिकारीसहितको टोली राहत लिएर पुगेको छ । विस्थापितका लागि ४ सय थान त्रिपाल र राहत सामग्री लिई आएको प्रजिअ थापाले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०७:५९
श्रावण १, २०७६ डिल्लीराम खतिवडा
(भालमन्ती, उदयपुर) — बाढीले विस्थापित ४८ परिवार तीन दिनयता उदयपुरको बुलबुले भमरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको भवनमा आश्रय लिइरहेका छन् । त्रियुगा नदीको बाढीले सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिका–२ मा गाउँ नै डुबाएपछि उनीहरू सुरक्षित थलो खोज्दै बेलका नगरपालिका–१ भालमन्ती आइपुगेका हुन् ।
राति नै बस्ती छाडेर भाग्नुपरेकाले उनीहरूलाई खान–बस्न उनीहरूलाई सास्ती छ । आश्रय लिएकामध्ये केही गर्भवती र बिरामी बालबालिका पनि छन् । सामुदायिक भवनको तीनवटा कोठामा बालबच्चासहित कोचिएर बसेकामा ५० बालबालिकासहित २ सय ३१ जना छन् ।
केहीलाई पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने र ज्वरो आउने समस्या छ । खानेपानी शुद्ध नभएकाले अधिकांशलाई रुघाखोकीले सताएको छ । ‘बाढीले विस्थापितलाई खान, बस्न समस्या छ,’ स्थानीय सम्झना पौडेलले भनिन्, ‘उनीहरू यता आएको सप्तरीको प्रशासनले थाहा नपाएजस्तो छ । सहयोग गरेका छैनन् ।’
तीन दिनदेखि चिउरा–भुजाको भरमा गुजारा गरिएको विस्थापितमध्येका उसमान मियाँले बताए । ‘बल भएकाले जे गर्दा पनि भइहाल्छ । बालबच्चा र बूढाबूढीलाई समस्या छ,’ उनले भने, ‘बिरामीका लागि उपचारको व्यवस्था गरिदिए उपकार हुने थियो ।’
सरकार बेखबर रहँदा कुनै पनि सहयोग नपाएको उनले बताए । वडासदस्य मोहम्मद जाहिर हुसेनमार्फत नगरपालिकाले प्रतिपरिवार १/१ केजी चामल पठाएको थियो । त्यो पकाएर खाने अवस्था नरहेको पीडित बताउँछन् । भाँडाकुँडा छैनन्, दाउरा भिजेका छन् । पकाउने व्यवस्था नहुँदा चिउरा र भुजाको भरमा गुजारा चलाउनुपरेको ५४ वर्षीया फुलोदेवी रामले बताइन् । ‘दाल, चामल दिएरमात्रै भात पाक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘पकाउने भाँडा, दाउरा र नुनतेलको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यो केही भएको छैन ।’ घरमा भएका अन्नपात, भाँडाकुँडा र लुगा सबै बाढीले बगाएकाले बिचल्लीमा परेको उनले बताइन् ।
भालमन्तीका स्थानीयले डुबेको गाउँबाट निकालेर सामुदायिक वनको भवनमा राखिदिए पनि आफ्नो नगरपालिकाका जिम्मेवार व्यक्ति हेर्न पनि नआएको उसमान मियाँले बताए । ‘आपतविपद्मा काम गर्छन् भनेर जनप्रतिनिधि बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘तर, समस्या पर्दा काम गर्न सकेका छैनन् ।’ शरण लिएकालाई खानेपानीको पनि समस्या छ ।
बेलका नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष दिनेश चौधरीले आफ्नै वडा बाढीको चपेटमा परेकाले छिमेकी नगरबाट आएकालाई सहयोग जुटाउन गाह्रो परेको बताए । ‘हाम्रो आफ्नै वडा पनि बाढीपीडित छ,’ उनले भने, ‘आफैँ पीडित भएकाले सहयोग गर्न गाह्रो भयो ।’ सम्बद्ध जनप्रतिनिधिलाई यसबारे खबर गर्ने उनले बताए । उता सप्तकोसी–२ का वडाध्यक्ष सोनाला चौधरीले बाढीबाट ठूलो क्षेत्र प्रभावित भएकाले उदयपुरतर्फ शरण लिन गएका परिवारका बारेमा जानकारी नभएको बताए । ‘प्रभावित परिवारलाई त्रिपाल र अरू आवश्यक सामान वितरणको व्यवस्था गर्न वडासदस्यलाई जिम्मेवारी दिएका छौं,’ उनले भने ।
बाढीपीडितका लागि उद्धार र राहतमा जुट्नुपर्ने बेलामा सप्तकोसी नगर कार्यसमितिलाई मंगलबार नगरसभाको चटारो थियो । नगरसभा भएकाले बाढीपीडितको आश्रयस्थलमा आफू पुग्न नसकेको नगरप्रमुख उत्तम गौतमले बताए । ‘बाढीपीडितका लागि चामल, चिउरा र त्रिपालसहितको राहत व्यवस्था गरिएको छ, त्यो वितरण पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नगरसभा सकेर म आफैँ प्रभावित परिवारलाई भेट्न जान्छु ।’ असार १० भित्र गर्नुपर्ने नगरसभा कर्मचारी अभावले ढिला भएको उनले बताए ।
त्रियुगा नदी बीच भागबाट बगेका कारण सामान्य अवस्थामा पनि विस्थापितको गाउँ पुग्न उदयपुरको बाटो भएर जानुपर्ने अवस्था छ । अहिले आश्रय लिएको स्थान र सप्तकोसी नगरपालिकाको केन्द्र फत्तेपुर बजारको दूरी करिब ३ किमि छ ।
घर फिर्न थाले विस्थापित
विराटनगर– सोमबारदेखि पानी पर्न कम भएपछि विराटनगर महानगरपालिकाका बाढीपीडित परिवार मंगलबारदेखि घर फिर्न थालेका छन् । महानगरका १९ वटै वडामा पानीको निकास नहुँदा बस्ता, सिंघिया र केसलिया खोलाको पानी बस्ती पसेको थियो । यसबाट करिब हजार परिवारलाई सुरक्षित स्थलमा राखिएको थियो ।
वडा ७ का विस्थापित ५६ परिवार मंगलबार घर फर्किएको वडा प्रमुख मधुबाबु तिवारीले जानकारी दिए । उनीहरू स्थानीय गायत्री संस्कृत विद्यालयमा बसेका थिए । त्यसैगरी वडा नम्बर ८ का पीडित परिवार पनि घरतर्फ लागेको वडाध्यक्ष निश्चल अर्यालले बताए । महानगर १ को विजयपुर, पाथीभरा मन्दिरको धर्मशाला, शान्तिचोक र नयाँ बस्तीमा राखिएका १ सय २५ विस्थापित परिवार पनि मंगलबार घरतर्फ लागेको वडा प्रमुख उद्धव अर्यालको भनाइ छ । केही परिवार भने फर्किन नसकेको महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले बताए ।
कपिलवस्तु– बाढीले विजयनगर गाउँपालिका–५ स्थित चिरई खोलामा रहेका ४ सीमास्तम्भ ढालिदिएको छ । ठकुरापुर र भारतको बलरामपुरस्थित सिमानामा रहेका ५७८/७ र ५७८/१० तथा विजयनगर–७ गेडुवाजोत र भारतको प्रतापपुरको सिमानामा रहेका ५७७/७ र ५७७/९ नम्बरका स्तम्भ ढलेका हुन् । गाडिएकै स्थानमा ढलेको ७ नम्बर वडाध्यक्ष दिनेश चौधरीले बताए । ५७८/७ नम्बरको स्तम्भमात्र पानीबाहिर देखिएको छ ।
प्रहरी चौकी ठकुरापुरले स्तम्भ ढलेको जानकारीपछि मुचुल्का उठाएर जिल्ला प्रहरीमा पठाएको छ । ‘तीन स्तम्भ ढलेको सूचना आएको छ,’ प्रजिअ गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘तिनलाई छिट्टै मर्मत गर्छौं ।’ सीमा अवलोकनका लागि नेपाल–भारतका अधिकारीको बैठक राखेर पहिलेकै ठाउँमा गाडिने उनले बताए । सीमा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीले पनि सम्बन्धित विभागलाई स्तम्भ ढलेकोबारे जानकारी गराएको सशस्त्रको २८ नं. गणका उपरीक्षक दीपक अधिकारीले जानकारी दिए ।
राहत लिन पीडितलाई परिचयपत्र
सिरहा– बाढीपीडित परिवार राहत पाउनबाट वञ्चित नहोऊन् भनेर सिरहाका स्थानीय तह एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘परिचयपत्र’ को व्यवस्था गरेका छन् । त्यसका लागि स्थानीय तहले घरदैलो सर्वेक्षण गरी परिचयपत्र वितरण थालेका छन् ।
परिचयपत्रका आधारमा राहत वितरण गरिँदा सही पीडितको हातमा राहत पुग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताए । लगातारको वर्षापछि कमला खोलामा आएको बाढीले बाँध भत्काएपछि सिरहाको तटीय क्षेत्र सारस्वर, बसबिटा, मखनाहा, कठकोल्वा, गम्हरियालगायत दर्जनौं गाउँ डुबानमा छन् ।
वर्षाले सिरहामा ५ हजार २० घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी ९ हजार ६२ घरमा आंशिक क्षति र २ हजार ६ सय ३१ परिवार बाढी र डुबानबाट विस्थापित भएका छन् । बाढीमा परी मिर्चैया नगरपालिका ४ का ५ वर्षीया प्रियंका महतो, रागनी महतो, नरहा गाउँपालिका ३ का ५५ वर्षीय शोभित कटुवाल, २० वर्षीय बलि साहको मृत्यु भएको छ । मृतक एक महिलाको पहिचान खुल्न सकेको छैन ।
सिरहातर्फका कल्याणपुर, सारस्वर र बसबिटा क्षेत्रबाट बाँध भत्काएर कमला खोलाको बाढी बस्ती प्रवेश गरेको हो । सिँचाइका लागि कमला नदी नियन्त्रण योजना कार्यालय जनकपुरले निर्माण गरेको कल्भर्टमा ‘एन्टी लड सुलुस गेट’ अधुरै छाडदा त्यहीँबाट बाढी गाउँ पसेको थियो । यसबाट सिरहा कर्जन्हा नगरपालिका ३ स्थित सुन्दर बस्ती विस्थापित छ । ४० घरपरिवारको बसोबास रहेको बस्ती पूरै डुबानमा छ ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०७:५६
'आन्तरिक विमतीमा अल्झिएर जनताको जीवन रक्षाको दायित्त्वबाट विमुख बन्‍न मिल्दैन'
सरकारको ध्यान महामारी र विपत्तिमा परेका नागरिकका जिउधनको रक्षामा केन्द्रित : प्रधानमन्त्री [सम्बोधनको पूर्णपाठ]
बाढी पहिरो पीडितप्रति तामाङ घेदुङको चासो
सीसीएमसी बैठकमा नगरपालिका सञ्‍जालका प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगिने
पहिरो र बाढीजन्य प्रकोपका १६३ घटना : ५० जनाको ज्यान लियो, २ सय ६५ परिवार प्रभावित